Gbasara Anyị - Mkpa mmanụ na-eweta n'ùkwù | AromaEasy
E guzobere Aromaeasy na 2008 ma bụrụ na mbụ na USA, Aromaeasy ngwa ngwa tolitere na azụmaahịa a na-akwanyere ùgwù n'ụwa niile ma taa nwere aha ọma dị ka onye na-eduga ngwaahịa dị oke mkpa dị mkpa na mmanụ na-ekesa. Ọganihu na mmepe nke ọrụ zuru ụwa ọnụ mere ka e guzobe ụlọ ọrụ niile (mmepụta, ụlọ nkwakọba ihe na ire ere) na US na China
Ndị ọrụ ahụ na-arụkọ ọrụ ọnụ ma bụrụkwa ndị otu ụlọ ọrụ ọkachamara na-arụ ọrụ nke ukwuu nwere oke mmụọ maka mmanụ dị mkpa, ịdị mma, na iguzosi ike n'ezi ihe.
A maara ha maka omume enyi ha na -eme ịzụ ahịa, ntinye ntụkwasị obi ha na ntụkwasị obi na ahụmịhe isiokwu ha n'inye ihe ndị dị mma. Ụkpụrụ omume ọma bụ isi nke etinyere ntọala ụlọ ọrụ ahụ ka na -eduzi azụmaahịa taa.
Usoro omume a maka arụmọrụ pụtara na a na-azụ ma na-eji ngwaahịa eme ihe n'eziokwu na iguzosi ike n'ezi ihe. Ebumnuche bụ isi bụ inye ndị ahịa anyị:
Ọrụ pụrụ iche
Ahụpụrụ iche ngwaahịa
Nnukwu uru maka ọnụahịa ahụ
Site na ndị na-eto eto anyị na ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa nnukwu na obere, mmekọrịta ọ bụla dị iche na nke kachasị mkpa anyị. Anyị na-agba mbọ ijide n’aka na ị na-eche otu ahụ oge ọ bụla ị na-emeso anyị.
Anyị kwenyere n'ezie na "Ọ bụ ihe dị n'ime ahụ," yabụ, n'ime karama ọ bụla, ị ga - ahụ ngwaahịa ndị anyị ji eme ọnụ. Ihe ọ bụla dị na nso anyị na-agbaso usoro nhọrọ nhọrọ anyị na njikwa njikwa mma.
Banyere ngwaahịa anyị
Nchịkọta nhọrọ otu akara maka ngwaahịa iji tinye na usoro Aromaeasy bụ nghọta. Anyị na-achọ nke a n'aka ndị na-ebubata anyị, dịka ị si n'aka anyị dị ka ndị na-azụ gị. Anyị nwere ike ịkwado ihe anyị na-ekwu na ihe akaebe egosipụtara na usoro njikwa njikwa anyị na-enye anyị ohere ịnye nyocha zuru oke maka ụdị ọ bụla na ngwa ọ bụla dị na Aormaeasy.
Anyị na-aghọtakwa mkpa ọ dị ịmara mmalite, usoro mmịpụta, data teknụzụ, yana ozi usoro iwu gbasara ihe mejupụtara gị.
Banyere ngwongwo anyị
Ndị na-eweta anyị bụ azụ nke azụmaahịa anyị. Nkwekọrịta nkesa na-enweghị atụ nke anyị na ọtụtụ ndị na-eweta ngwaahịa anyị ugbu a pụtara na anyị nwere ike ịkekọrịta oke akụkọ ndị ọzọ sitere na gburugburu ụwa gbasara ha na ngwaahịa ha.
Banyere ndị ahịa anyị
Ndị ahịa anyị, nnukwu na obere, nwere otu ihe, ha niile hụrụ mmanụ dị mkpa n'anya.
Ihe ndi n’eme mma, ndi na emeputa ihe na ndi nwere akara nwere mmanu di nkpa ka ha na etinyecha ihe banyere ihe ohuru ohuru ohuru, na enyere aka meputa ihe nhicha ma obu ihe nlere anya nke onwe ya.
Ndị ahịa azụmaahịa SME (dịka ndị na-agwọ ọrịa ọgwụ, spa na salons mara mma) hụrụ mmanụ ndị dị mkpa n'anya n'ihi na ha nwere ike bụrụ isi ihe dị iche maka akara gị na ihe ndị ahịa gị ga-alaghachi.
Personal ojiji ahịa n'anya mkpa mmanụ dị ka ha bụ ndị vasatail n'ụlọ na n'ebe ọrụ. Ha nwere ike inye aka mee ka ọnọdụ dị n'ụlọ, mepee ime ụlọ ịwụ ahụ, nyere aka na ịmụrụ anya n'ime ụlọ, nye nghọta doro anya na oge nyocha, mee ka obi nwee udo n'oge ụra, ma ọ bụ bụrụ njedebe aka. maka Mee N'onwe Gị ihe ịchọ mma eji ịhụnanya rụọ.
Ma onye ahịa ọ bụla buru ibu ma ọ bụ pere mpe, anyị na-emeso onye ọ bụla na-azụ ahịa otu ọkwa ọkachamara na nkwanye ùgwù.
Banyere otu anyị
Ndị otu anyị na-agba mbọ ịrụkọ ọrụ ọnụ iji nye ahụmịhe na ọrụ ndị ahịa kachasị mma.
Anyị na-agbasi mbọ ike ịkwalite ngwaahịa anyị, sistemụ anyị, yana ọkwa ọrụ anyị, anyị na-akpọkwa gị ka ị nye nzaghachi n'oge ọ bụla.
Edozi ugbu a!